इलिक्विस बनाम वारफेरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण प्रेस औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> इलिक्विस बनाम वारफेरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
तपाईले एलिकिस (एपिक्सबान) र वारफेरिनको बारेमा सुन्नु भएको हुन सक्छ यदि तपाईलाई एन्टिकोआगुलेन्टको प्रयोगलाई प्रमाणित गर्ने सर्त पहिचान गरिएको छ भने। अन्यथा रगत पातलोको रूपमा चिनिने एलिक्विस र वारफेरिन रगतको थक्कीहरू गठन रोक्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रगतको थक्का रोक्न, यी औषधीहरूले गहिरा शिरा थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) र एट्रियल फाइब्रिलेशनमा स्ट्रोक जस्ता अवस्थाको जोखिम कम गर्न सक्दछन्। जबकि दुबै औषधीको समान कार्यहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि विभिन्न तरिकाहरूमा भिन्न हुन्छन्।
एलीक्विस (एलीक्विस के हो?) एपिक्सबानको ब्रान्ड नाम हो। यो फेक्टर Xa को एक चयनित अवरोधकर्ताको रूपमा काम गर्दछ, जो क्लोट गठनमा एक महत्त्वपूर्ण घटक हो। यस कम्पोनेन्टलाई सीधा अवरोध गरेर, त्यहाँ प्लेटलेट र थ्रोम्बसको विकास कम हुन्छ जसले अन्ततः रगतको थक्का कम गर्दछ।
इलिक्विसलाई नन्भाभावलुलर एट्रियल फाइब्रिलेशनका बिरामीहरूमा स्ट्रोक र सिस्टिमिक एम्बोलिजमको जोखिम कम गर्न संकेत गरिएको छ। यो गहिरा नसा थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) र निश्चित व्यक्तिहरूमा पल्मोनरी एम्बोलिजम (पीई) लाई रोक्न र उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
इलिक्विस २. mg मिलीग्राम र mg मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा प्रशासित गर्न सकिन्छ। हाल, कुनै जेनेरिक मौखिक ट्याब्लेट उपलब्ध छैन। सिफारिस गरिएको खुराक उपचार भइरहेको अवस्थाको आधारमा चर हो। शक्तिको बावजुद, यो प्राय: दैनिक दुई पटक गरिन्छ। प्रयोगशाला मानहरू र INR को लागि अनुगमन नियमित रूपमा यस औषधिको साथ आवश्यक पर्दैन।
कम्तिमा २ सुविधाहरूका साथ डोज गर्ने समायोजनहरू आवश्यक पर्दछ: 80० बर्ष उमेर र अधिक उमेरको, शरीरको वजन 60० किलोग्राम भन्दा कम (लगभग १2२ एलबीएस), वा १. ser मिलीग्राम / डीएल भन्दा बढि सीरम क्रिएटिनिन वा। । गर्भवती बिरामीहरू वा गम्भीर कलेजो बिरामी भएकाहरूमा एलिकिसको प्रयोगको सिफारिश गरिदैन।
इलिक्विसमा उत्तम मूल्य चाहिएको छ?
एलिसीस मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
वारफेरिन (वारफेरिन भनेको के हो?) कुमाडिनको सामान्य नाम हो। यसले भिटामिन के विरोधीको रूपमा काम गरेर रगत जमाउने रोक्छ। भिटामिन के एक आवश्यक कम्पोनेन्ट हो जुन शरीरमा क्लट बनाउन अन्य कारकहरूको साथ साथ आवश्यक पर्दछ। भिटामिन के अवरोध गरेर, नयाँ क्लटहरू गठन गर्न सकिदैन।
वारफेरिनलाई डिभिटहरू र पीईहरू रोक्नका लागि इलिक्विस जस्तो संकेत गरिएको छ। यो थ्रीट फाइब्रिलेसन र कार्डियक वाल्भ प्रतिस्थापनको साथ उत्पन्न हुनसक्ने जटिलताहरूको उपचार गर्न र रोक्न पनि प्रयोग गरिन्छ। थप रूपमा, वारफेरिनले प्रारम्भिक हार्ट अट्याक पछि हृदयघात र स्ट्रोकको भविष्य जोखिम कम गर्न सक्छ।
एलिकिस भन्दा फरक, वारफेरिन मौखिक ट्याब्लेटमा जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ १ मिलीग्राम, २ मिलीग्राम, २. mg मिलीग्राम,3मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, .5. mg मिलीग्राम, र १० मिलीग्राम। वारफेरिन डोज उपचारको लागि संकेतमा निर्भर अत्यधिक परिवर्तनशील छ। उपलब्ध शक्तिहरूको विस्तृत श्रृंखलाको कारण, वारफेरिन खुराक बहुमुखी र अत्यधिक व्यक्तिगतकृत छ।
राम्रो रगत चिनी दायरा के हो
आईएनआर, वा अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य अनुपात, नियमित रूपमा यो औषधि लिने अनुगमन गरिनु पर्छ किनभने यी स्तरहरू खुराक, आहार, र अन्य कारकहरूमा परिवर्तनप्रति संवेदनशील छन्। विशिष्ट चिकित्सकीय INR गोल दायरा ०.० र 3.0.० बीचको हुन्छ।
फार्मेसी छुट कार्ड पाउनुहोस्
इलिक्विस बनाम वारफेरिन साइड साइड साइड साइड
इलिक्विस र वारफेरिन दुई एन्टिओगुलन्टहरू हुन् जसमा समान संकेतहरू छन्। तिनीहरूसँग कसरी काम गर्दछन् र अन्य लागूपदार्थसँग अन्तर्क्रियामा फरक पर्दछ। यी समानताहरू र भिन्नताहरू तल अन्वेषण गर्न सकिन्छ।
स्ट्रोक र एम्बोलिजमको जोखिम गैरवाल्भाल्युलर एट्रियल फाइब्रिलेशनमा
डीवीटी र पीई उपचार
डीवीटी र पीई प्रोफेलेक्सिस
रोकथाम र जटिलताको एट्रियल फाइब्रिलेशन र कार्डियक भल्भ प्रतिस्थापनबाट उपचार
प्रारम्भिक हृदयघात पछि मृत्यु, बारम्बार हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम भयो
कारक Xa अवरोधकर्ता
भिटामिन K विरोधी
77((प्रति tablets० ट्याब्लेट)
(43 (प्रति १०० ट्याबलेट)
P-gp र CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू
P-gp र CYP3A4 inducers
एलिकिस गर्भावस्था कोटि बीमा छ। गर्भवती महिलाहरूमा एलिकिसलाई आकलन गर्ने कुनै समर्पित अध्ययन हुँदैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउने हो भने कदम चाल्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
वारफेरिन गर्भावस्था कोटि X मा छ। वारफेरिनले भ्रुणलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ र गर्भवती महिलाहरूमा प्रयोगको लागि contraindated छ।
इलिक्विस र वारफेरिन दुईवटा एन्टिकोएगुलेन्ट औषधिहरू हुन् जुन बिभिन्न तरीकाले कार्य गर्दछ। इलिक्विसले कारक क्सा अवरोधकको रूपमा काम गर्दछ जबकि वारफेरिन एक भिटामिन के विरोधी हो। यद्यपि तिनीहरू कार्य गर्ने विधिमा फरक छन्, उनीहरूले रगतको थक्का कम हुने समान प्रभाव उत्पादन गर्दछ।
दुबै एलिकिस र वारफेरिनसँग थ्रोम्बोसिस (डीभीटीहरू र पीई) लाई रोक्न र समान रोकथाम गर्न समान संकेतहरू छन्। जबकि इलिक्विसले गैरवाल्भुलर एट्रियल फाइब्रिलेसनबाट जटिलताहरूलाई रोक्न सक्दछ, वारफेरिनले एट्रियल फाइब्रिलेशन र / वा कार्डियक वाल्भ प्रतिस्थापनबाट जटिलताहरूलाई रोक्न र रोक्न सक्छ। वारफेरिन एफडीएलाई पनि हृदय रोग, स्ट्रोक, र हृदयघातबाट बचाउन को लागी अनुमोदित छ जसले पहिले नै हृदयघातको अनुभव गरिसकेका छन।
इलिक्विस कसैको लागि रुचि हुन सक्छ जो आईएनआर ल्याबहरूको लागि नियमित अनुगमन हुन चाहँदैन। एआरआईएसओटीटीएल परीक्षण अनुसार, एलिकिसले स्ट्रोकको जोखिममा ठूलो कटौती, ठूलो रक्तस्रावको खतरा कम, र वारफेरिनको तुलनामा समग्र मृत्युदर कम भएको देखाइएको छ। एलीक्विसको एक नकारात्मक पक्ष बजारमा उपलब्ध जेनेरिक फार्मुलेसनको वर्तमान अभावका कारण उच्च मूल्य हो।
Cancer क्यान्सर स्क्रीनि women महिलालाई चाहिन्छ
Naproxen हो र एक ही कुरा मार्फत
जब जेनेरिक अल्बूटेरोल एचएफए उपलब्ध हुनेछ
गर्भवती हुँदा तपाईले एलर्जीको लागि के लिन सक्नुहुनेछ
के हुन्छ यदि तपाई धेरै धेरै गम्मी भिटामिन खान्नुहुन्छ भने
बान्ता लागि काउन्टर औषधी भन्दा राम्रो
तपाईको लागि धेरै भिटामिन खराब छ